Nhau - Musiyano uripo pakati pe PE / PVC / POF inodzora firimu
Musiyano uripo pakati pe PE / PVC / POF yekudzora firimu
1. Tsanangudzo dzakasiyana:
Pe firimu chinhu chine kusimba kwakanaka kwazvo, uye hazvisi nyore kupwanya neakajairwa epurasitiki crusher. Nekuti iyo PE firimu iri yakapfava uye yakaoma, hazvisi nyore kubvarura, tisingataure tembiricha yakakwira yechishandiso pakumhanya, izvo zvinoita kuti LDPE inyungudike uye inonamatira kune iro chipasa. Pe pelletizing inogona kuiswa mukati mechikafu chechidimbu cheiyo extruder kuita mitsetse, uye iyo PE firimu inozvuzvurudzwa mudhiramu ne shear simba reiyo screw kuti ipise, isungunuke, uye extrude kuti pelletize. Yekutanga-giredhi zvinhu zvakawanikwa ne PE zvichiri zvinogona kufuridzwa firimu, inoshandiswa isiri-chikafu uye mishonga kurongedza, uye zvakare inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kweOxford dehwe neturuvhuru, ine ramangwana rakajeka.
PVC polyvinyl chloride, iine zvimwe zvinongedzo zvekusimudzira kupisa kwayo kupisa, kuomarara, ductility, nezvimwe. Iyo yepamusoro yepamusoro peiri pevhu firimu iri lacquer, chinhu chikuru pakati nepakati polyvinyl chloride, uye yepazasi denderedzwa inonamatira kumashure. Iyo mhando yezvinhu zvekugadzira izvo zvinonyanyo kudikanwa, zvinozivikanwa uye zvinoshandiswa zvakanyanya mupasi nhasi. Pakati pezvinhu izvo zvinogona kuburitsa matatu-mativi epamusoro mafirimu, PVC ndiyo inonyanya kukodzera zvinhu.
POF zvinoreva kupisa inodzikira firimu. POF inomiririra akawanda-masiraji co-extruded polyolefin kupisa shrinkable firimu. Iyo inoshandisa yakatetepa yakaderera-density polyethylene seyakaganhurirwa yepakati (LLDPE) uye co-polypropylene (pp) sematanda emukati nekunze. Iyo yakaiswa epurasitiki uye kuburitswa kunze kwemuchina, uye wozogadziriswa nemaitiro akasarudzika senge kufa kwekuumba uye firimu bubble inflation.
Pe kupisa kupisa shrinkable firimu kunoshandiswa zvakanyanya mune yese gungano kuputira waini, magaba, mamineral mvura, dzakasiyana siyana zvinwiwa, machira uye zvimwe zvigadzirwa. Chigadzirwa chine mukana wakanaka wekuchinja, kusagadzikana kwekumanikidza uye kupokana kwemisodzi, uye hazvisi nyore kutyora uye kutya. Mhute uye yakakwira shrinkage chiyero.
Nekuda kweakasarudzika masisitimu ePV (mvura-proof, isina moto, anti-static, iri nyore kuumba) uye yakadzika-yekuisa uye yakakwira-inoburitsa hunhu hwePV, inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yezvivakwa uye indasitiri yekupakata. Naizvozvo, PVC firimu ine yakajeka pachena, yakanaka gloss uye shrinkage. Zvimiro zveyero yepamusoro.
POF rudzi rwekupisa hunodzikira firimu, inonyanya kushandiswa kuputira zvigadzirwa zvine zvakajairwa uye zvisina kujairika maumbirwo. Nekuda kwekuchengetedzwa kwayo kusiri-chepfu uye kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kujekesa kwakakwirira, kupisa kwakanaka-kusagadzikana, kubwinya kukuru, kuomarara, kuramba misodzi, Ine hunhu hweyunifomu yekupisa kupisa uye inokodzera otomatiki-ekumhanyisa kurongedza. Icho chigadzirwa chinotsiva chetsika PVC kupisa inodzikira firimu.
Inoshandiswa zvakanyanya mumotokari, zvigadzirwa zvepurasitiki, zvinyorwa, mabhuku, zvemagetsi, mabhodhi edunhu, MP3, VCD, zvigadzirwa zvemaoko, mapikicha emifananidzo uye zvimwe zvigadzirwa zvehuni, matoyi, mishonga yekuuraya zvipuka, zvinodikanwa zvezuva nezuva, chikafu, zvigadzirwa, zvinwiwa zvemumagaba, zvigadzirwa zvemukaka, mishonga, Zvigadzirwa senge makaseti nematepi evhidhiyo.
Post nguva: Zvita-18-2020
Polyolefin Pof Shrink Firimu, Tambanudza Firimu Vs Shrink Kuputira, Polyolefin Pof Shrink Kuputira, Shrink Kuputira Firimu Rolls, Shrink Firimu Pvc, Polyolefin Shrink Kuputira Tembiricha,